Afrika oo la xaqiijiyey in kiisaska 'Covid-19' ay ka kor u dhaafeen 250,000 oo kiis – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Afrika oo la xaqiijiyey in kiisaska ‘Covid-19’ ay ka kor u dhaafeen...
Afrika oo la xaqiijiyey in kiisaska ‘Covid-19’ ay ka kor u dhaafeen 250,000 oo kiis
Tirada kiisaska la xaqiijiyay ee loo yaqaan ‘Covid-19’ ee guud ahaan qaaradda Afrika ayaa gaarey 254,291 illaa iyo galabnimadii Isniinta, Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Afrika (CDC) ayaa tiri.
Hay’adda CDC ee Afrika, ayaa warbixinteedii ugu dambeysay, waxay sheegtay in tirada dadka u dhintay masiibada sidoo kale ay gaartay 6,795 illaa iyo galabta Isniinta.
Hay’adda xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee loo yaqaan ‘CDC’, oo xustay in fayrasku ku faafay 54 dal oo Afrikaan ah, ayaa sheegay in ilaa 116,779 qof oo qaba cudurka ‘Covid-19’ ay ka soo kabtaan qaaradda oo dhan.
Iyada oo ay jirto faafinta degdegga ah ee loo yaqaan ‘Covid-19’ guud ahaan qaaradda Afrika, ayaa waddamada Afrika ee sida weyn ay u saameeyeen waxaa ka mid ah Koonfur Afrika, Masar, Jabuuti, Morocco, iyo Nigeria, sida lagu xusay.
CDC-da Africa waxa kale oo ay sheegtey in gobolka Koonfurta Afrika uu hadda yahay meesha ugu wax yeelada badan ee qaaradda ka jirta marka loo eego kiisaska togan ee ‘Covid-19’, oo ka sarreeya gobolka waqooyiga Afrika.
Previous articleKenya Airways waxay qorsheyneysaa inay dib u bilowdo duulimaadyadii rakaabka
Next articleMagacyada Gudiga farsamo ee kuwada hadlaya jabuuti